Galmudug Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Galmudug'
Madaxweyne Xaaf oo Xaalad Deg Deg Ah ku soo Rogay Deegaanada Galmudug (Akhrisso)
Madaxweynaha maamulka Galmudug, Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ay dhawaan xildhibaano ka tirsan Maamulkaasi ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen ayaa maanta soo saaray Wareegto uu xaalad deg deg ah ku gelinayo deegaanada Galmudug. Wareegtadaan ayaa lagu shaaciyay in mudo Saddex bilood ah xaalad deg deg ah la geliyay maamulka Galmudug isla markaana Ciidamada Galmudug …
Madaxweyne ku Xigeenka Galmudug oo Maanta Dhagaxdhigay Xarun Cusub oo Baarlamaankaasi loo Dhisayo (SAWIRRO)
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Galmudug mudane, Maxamed Xaashi Cabdi ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xarun cusub oo loo dhisayo Baarlamaanka Maamulkaasi Galmudug. Xildhibaanada maamuklka Galmudug ayaan hadda Lahayn xarun Baarlamaan oo toos ah oo ay ku shaqeeyaan, marka laga soo tago inay ku shiraan hoolka Madaxtooyadda maamulkaasi Galmudug. Madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Maxamed Xaashi ayaa …
Madaxweynaha Cusub ee Galmudug oo soo Gaaray Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa shalay kasoo degay Madaxweynaha cusub maamulka Galmudug mudane, Axmed Ducaale Geele (Xaaf) oo maalmo ka hor lagu doortay magaalada Cadaado. Madaxweynaha ayaa markii uu kasoo degayay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde, waxa uu watay diyaarad gaar ah oo kasoo qaaday magaalada Cadaado, waxaana diyaarada dhinac ka …